Ciidamo kasoo horjeestay Amarka Saciid Deni oo Boosaaso isku gedaamay.
Thursday November 25, 2021 - 06:48:33
Xiisado colaadeed ayaa lagasoo sheegayaa magaalooyin katirsan gobolka Bari saacado kadib markii shaqada laga eryay taliye maleeshiyo oo uu Mareykanku tababaray.
Ciidamada loo yaqaan PSF oo qaab ashahaadda ladirirnimo ay utababareen dowladaha reergalbeedka ayaa isku gedaamay xarumaha ugu muhiimsan magaalada dekadda leh ee Boosaaso.
Sida ay wararku sheegayaan ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa fariisimo ka sameystay afaafka hore ee xarumaha maamulka Boosaaso, saraakiil uhadashay PSF ayaa sheegay in aysan aqoonsaneyn wareegtadii xilka looga qaaday taliyahoodi.
Saciid Deni ayaa maalmo ka hor shaqada ka eryay taliyihii maleeshiyaadka PSF balse tallaabadaas ayaa dhalisay xiisado ka dhanka amniga ah, Maleeshiyaadka PSF waxaa tababaray Mareykanka iyaga ayaana qalabeeya oo bixiya mushaaraadkooda waana maleeshiyaad loo carbiyay ladagaallanka muslimiinta.